Iindaba -Izindlela ezininzi zokuphuhlisa ishishini
Iinxalenye Auto Truck
Icandelo leVolvo Auto
I-Scania Auto Parts
Izahlulo zomntu ezizenzekelayo
Izixhobo ze-MB ezenzekelayo
Izahlulo ze-DAF ezenzekelayo
Icandelo leRenut Auto
IiHino Auto Parts
Icandelo leHyundai Auto
Icandelo leCar Auto
Zininzi iindlela zokuphuhlisa ishishini
I-Ningbo ZODI yakha iwebhusayithi entsha kunye nokwazisa ngoGoogle ukwandisa uluhlu lweshishini.
Ngophuhliso lwezenzululwazi kunye netekhnoloji, uninzi lobuchwephesha obutsha buvele. Ukufundiswa kwenethiwekhi kukwayaziwa ngenxa yeengxaki zentlalo. Ukubonisa kwi-Intanethi, enyanisweni, andilixhasi olu hlobo lwendlela yeshishini. Ewe kunjalo, inezibonelelo zayo. Umzekelo, unokukhangela abathengi kunye nabathengi banokushiya imiyalezo ukubuza, ukuze bakwazi ukunxibelelana ngokulula nangokuthe ngqo.
Zininzi izinto eziyimfuneko ekufuneka abathengisi bamazwe angaphandle bazanelise ngaphambi kokuba bathengise izinto zorhwebo phesheya phakathi kokusekwa kobudlelwane beshishini nabathengi abanokubakho kufuna ingqalelo ekhethekileyo. Ngokubanzi, abathumeli mpahla ngaphandle banokufumana ulwazi malunga nabathengi abanokuba phesheya kwezilwandle ngezi ndlela zilandelayo:
1. Iibhanki kwilizwe lomthengi
2. Amagumbi orhwebo kwamanye amazwe
3. Abameli abemi phesheya
4. Imibutho eyahlukeneyo yorhwebo
5. Ulawulo lwezorhwebo
6. Iphephandaba kunye nentengiso
Akuba efumene igama nedilesi yabo bafuna ukuba ngabathengi, umthumeli-ngaphandle angathumela iileta, iisetyhula, iikhathalogu kunye noluhlu lwamaxabiso kwabo bachaphazelekayo. Iileta ezinjalo kufuneka zixelele umfundi ukuba lifunyanwa njani igama lakhe kwaye zinike iinkcukacha malunga neshishini lomthumeli-ngaphandle, umzekelo, uluhlu lwempahla ephethweyo kunye nobungakanani.
Rhoqo, ngumngenisi-ngaphakathi oqala ileta yophando eya kumthumeli-ngaphandle ukuze afune ulwazi malunga neemveliso anomdla kuzo. Kwimeko enjalo, ileta kufuneka iphendulwe ngokukhawuleza nangokucacileyo ukudala ukuthanda okuhle kwaye kushiye umbono olungileyo umfundi. Ukuba uphando luvela kumthengi oqhelekileyo, impendulo ethe ngqo nenesidima, kunye nombulelo, yiyo yonke into eyimfuneko. Kodwa ukuba uphendula kumbuzo omtsha, uya kuyifumana ngocoselelo. Umzekelo, ungongeza uluvo oluhle kwimpahla ebuzwayo malunga nayo kwaye utsalele ingqalelo kwezinye iimveliso ezinokubangela umdla.
Ixesha Post: Sep-30-2020
I-Ningbo ZODI I-Auto Spare Izahlulo Co., Ltd.
Idilesi: No. 6 Lixin Road, Xiaogang Area Area, Tongtu Road, Ningbo, Zhejiang, China
Ifowuni: 0086-574-8619 1883
Ifeksi: 0574-8619 1883